Maxaa dhaliyey qaraxyadii weynaa ee ruxay Beyrut? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa dhaliyey qaraxyadii weynaa ee ruxay Beyrut?
Maxaa dhaliyey qaraxyadii weynaa ee ruxay Beyrut?
Beyrut (Caasimada Online) – Lubnaan ayaa gashay xaalad murugo ah, kadib markii qarax weyn oo ka dhacay caasimadda Beyrut uu dilay ugu yaraan 78 qof, halka dhaawacuna ka badan yahay 4,000.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhaw halkii lagu beegsaday ra’iisal wasaarihii hore Rafiiq Xariiri oo 15 sano ka hor lagu dilay gaari waxlaha qarxa laga soo buuxiyay.